ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအချိန်မရွေးမည်သူမဆိုရရှိနိုင်ဖြစ်လာသောအခါ,ငါတို့ကြင်နာညစ်ညမ်းမဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများ၏တည်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်. သို့မဟုတ်လူသိများတဲ့သီချင်းကထည့်လေ့မရှိအဖြစ်"ဗီဒီယိုရေဒီယိုကြယ်ပွင့်ကိုသတ်"။ ကောင်းပြီ,ဖြစ်ပျက်မှတူတစ်ခုခုများအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်,ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ကညစ်ညမ်းဗီဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းကိုသတ်လိမ့်မည်ဟုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အိုကေ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဝေးတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုပါ၊ဒါပေမယ့်သင်ဟာအခမဲ့အိုင်ကွန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေရဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းကိုသွားပြီးသင်ဟာစက်မှုလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုလွင့်စင်သွားလိမ့်မယ်။, ငါသည်ဤစုဆောင်းမှုအတွက်မည်သည့်ဂိမ်းသင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဆိုဒ်မှမဆိုညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကဲ့သို့ပင်ခက်ခဲစေနိုင်သည်ဟုအာမခံနိုင်သည်။ ထိုအခါငါပရီမီယံညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအကြောင်းပြောနေတာပေါ့,ငါးမိနစ်ဗီဒီယိုများနှင့်ခြေဆန့်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအခမဲ့လိင်ပြွန်မ.
သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုေႏွးေကြးေစဖို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိေစဖို႔ ဒီဆိုဒ္ကိုစတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါၿပီ။ သင်သာအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်သင်၏လက်ပေါ်မှာအချို့အားလပ်ချိန်မှာအချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းရာပေါင်းများစွာရှိသည်နှင့်သင်ကစားစတင်တစ်ချိန်ကရပ်တန့်ဖို့ခဲယဉ်းစေခြင်းငှါ. သင်ရုံကြည့်ရှုစတင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတွေထဲကကောက်,ကစားခလုတ်ကိုထိနှင့်အရာပဲဗီဒီယိုလွှင့်စတင်သည်ကဲ့သို့အစာရှောင်သင့်ဘရောက်ဇာအတွက်တက်ဝန်ပါလိမ့်မယ်. အဓိကခြားနားချက်ငါတို့သည်သင်တို့စုစုပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုရှိသည်သောကျော်စိတ်ကူးယဉ်အတူလာဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။, မဖော်ပြထားခြင်းဖို့ဤဂိမ်းအများစုကိုသင်လိုချင်တဲ့တူအောင်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သူစိတ်ကြိုက်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လာမယ့်နေကြသည်။ ရုံဤဒြပ်စင်နှင့်သင်ပြည့်စုံခံရဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအလိုဆန္ဒများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေဖွင့်လှစ်။ ရဲ့ဂိမ်း၏ဤလတ်ဆတ်တဲ့စုဆောင်းမှုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်သို့စကားပြောကြပါစို့။
ကျနော်တို့ကဒီမှာရှိသည်ဆိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သုတေသနပြု၏တစ်နှစ်ထက်ပို၏အဆုံးရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစကတည်းကဖုံးချင်တဲ့အမျိုးအစားနဲ့အမျိုးအစားတွေကိုငါတို့သိတယ်။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးဖြေလျှော့လိုက်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသူတွေနဲ့အစီအစဉ်တွေပြင်ဆင်ပြီးဂိမ်းတွေကိုစမ်းသပ်တာကအချိန်တော်တော်ကြာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြီးစီးခဲ့ပြီးယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အညာဘက်ကိုဂိမ်းနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအပေါငျးတို့သနီယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများကြိုဆိုဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကျနော်တို့မုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍကစားစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူရိုင်းသောကမ်ဘာပျေါတှငျမှညစ်ညမ်းဂိမ်းအတွေ့အကြုံကနေအရာအားလုံးရှိသည်။, ကျနော်တို့ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူလာ,ဆယ်ကျော်သက်ကနေအနာ,ဤဂိမ်းသူတို့ပိုကောင်းသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှသည်သူငယ်ကိုစိတ်ကြိုက်စေမည်.
ကျနော်တို့ဂိမ်းအားလုံးကိုအဓိကအမျိုးအစားဖွဲ့စည်းရန်။ သင်တစ်ဦးအမြန်ဂျာဗားအစည်းအဝေးချင်သည့်အခါအဘို့အစိတျအပိုငျးရ။ သငျသညျစိတျပိုငျဆိုငျရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခု၏စွန့်စားမှုအာရုံခံစားမှုခံစားရချင်သည့်အခါငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဂိမ်းရှိသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူအသီးအသီးမိတ်ဖက်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူစမ်းသပ်ကြကုန်အံ့တံ့သောချိန်းတွေ့ခြင်းကိုအင်္ဂါရပ်များ။, ပြီးတော့ငါတို့မှာစာသားအခြေပြုဂိမ်းတွေတောင်ရှိတယ်၊ကျောင်းဟောင်းကိုအသံသွင်းနိုင်တယ်၊ဒါပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအခြေအနေတွင်အနုပညာကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်ပိုမိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအပူဆုံးအဲလစ်ဇဘက်ပုံပြင်အချို့နှင့်လာခြင်းဖြစ်သည်၊သင်အဓိကဇာတ်ကောင်များ၏ပထမဦးဆုံးရှုထောင့်မှတွေ့ကြုံခံစားပြီးဂိမ်း၏အဆုံးသတ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
အခမဲ့အန်းဒရွိုက်ဂိမ်းတစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဆိုက်ဖြစ်ပြီးအလွန်ကြီးစွာသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်သမျှသောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်။ ဤအကြီးအကျယ်စုဆောင်းမှုမှတဆင့်သွားကြဖို့,သင်အသုံးပြုတဲ့အခါစက္ကန့်အတွင်းကြီးမြတ်ရလဒ်များကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖြစ်ကြောင်းကြည့်ရှုကိရိယာအစုတခုရပါလိမ့်မယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျအမြားဆုံးကစားနေသောနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းကနေအကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူပါလာသောနောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းနေသောစစျဆေးဖို့ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ရပ်ရွာအကြောင်းပြောနေတာကျနော်တို့မှတ်ချက်ပေးကဏ္ဍများနှင့်သင်ညစ်ပတ်သောအရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုပို့စ်တင်နိုင်မည့်ဖိုရမ်ရှိသည်။, ဂိမ်းထဲမှာမင်းအကြောင်းပြောနိုင်တယ်၊မင်းရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေအကြောင်းပြောနိုင်တယ်၊မင်းမျှဝေချင်တဲ့ပုံပြင်တွေရှိရင်ငါတို့ဆိုဒ်မှာတက်ကြွနေတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ဂူးဂဲလ်ကနားထောင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တယ်။ ဒါေၾကာင့္ေနာက္တစ္ႀကိမ္လိင္တံေထာင္မတ္မႈကိုခံစားလာရတဲ့အခါအခန္႔မသင့္ရင္လိင္တံေထာင္မတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကိုလာပြီးပိုပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုရယူပါ။